HG Imithombo. Ukukhumbula umbhali wezinganekwane wesayensi omkhulu | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | inganekwane yesayensi, Abalobi, Fantasy, I-Novela
Isithombe se-HG Wells sikaGeorge Charles Beresford.
UHerbert George Wells Ushone ngo-Agasti 13, 1946 eLondon. Nganginakho iminyaka 79 futhi wayengumlando-mlando, isazi sefilosofi, futhi mhlawumbe umbhali waseNgilandi odume kakhulu amanoveli ezindaba eziqanjiwe zesayensi, umanduleli wohlobo. Sonke sifunde eminye yemisebenzi yakhe futhi uma kungenjalo, siyibonile ngokungenakubalwa ukuzivumelanisa namafilimu lokho kwenziwe eminyakeni edlule.
Namuhla ngikhumbula le classic yohlobo oluthile nabanye imishwana evela kumanoveli akhe ama-4 okwaziwa kakhulu: Isikhathi Somshini, Impi Yezwe, Isiqhingi SikaDoctor Moreau y Umuntu ongabonakali. Ngiphinde ngibuyekeze lokho kuguqulwa kwefilimu.
1.1 Umshini wesikhathi
1.2 Impi Yezwe
1.3 Isiqhingi SikaDokotela Moreau
1.4 Umuntu ongabonakali
2 Yikuphi okufanele ugcine?
Wazalelwa Bromley, eKent County, wayeyindodana yesithathu yomndeni osezingeni eliphansi owayekhathalela ukuthi banemfundo enhle.
Lapho a ingozi Uphoqe ukuthi alale embhedeni isikhashana, uthathe ithuba lokufunda okuningi, okuholele ekutheni afune ukubhala. Ngemuva kwalokho wenza isivumelwano ne- sofuba futhi wazinikela ngokuphelele ekubhaleni. Wayekhuthele kakhulu futhi wonke umsebenzi wakhe uthonywa ukujula kwakhe izinkolelo zezepolitiki.
Wakukhuthaza lokho isayensi nemfundo zizoba yizinsika ezimbili eziyisisekelo zomphakathi wesikhathi esizayo lapho umuntu angathatha khona ukweqa okungaphezulu.
En 1895 umphakathi Umshini wesikhathi, okokuqala njengochungechunge futhi kamuva njengencwadi ne- uphumelele kwaba ngokushesha. Wasuka lapho wababopha ngamaketanga. Ngawo lowo nyaka waphinde washicilela Ukuvakasha okuhle, futhi eminyakeni emithathu eyalandela amanoveli amathathu akhulisa udumo lwakhe: Isiqhingi SikaDoctor Moreau, Indoda Engabonakali y Impi Yezwe.
Umthetho wemvelo esiwukhohlwayo ukuthi ukuguquguquka kwemisebenzi yengqondo kuyisinxephezelo soshintsho, ubungozi kanye nokungazinzi ... Abukho ubuhlakani lapho kungekho shintsho futhi kungekho sidingo soshintsho. Izilwane ezinobuhlakani kuphela okufanele zibhekane nezinhlobonhlobo zezidingo nezingozi.
Amandla ngumphumela wesidingo; ukuphepha kusungula umklomelo wobuthakathaka.
Mhlawumbe ukufunda ukusebenzisa umshini wesibindi, ukuhamba ngokushesha ukuya emikhawulweni yempilo esheshayo, ukuthola ngezikhathi ezithile ipharadesi elifushane ngaphandle kwesikhathi esizayo noma esedlule, ngaphandle kokukhohliswa okuphindwe kabili kwesifiso nokwesaba.
Awukwazi ukuhamba nganoma iyiphi indlela ngesikhathi, awukwazi ukubalekela umzuzu wamanje.
Mhlawumbe ukujwayela ifilimu okudume kakhulu kule ndaba (futhi okuyintandokazi) yikhona okulingise URod Taylor en 1960 nokuthi iwine i-Oscar ngemiphumela ekhetheke kakhulu. Owokugcina wavela ngo-2002 futhi wadlala izinkanyezi uGuy Pierce noJeremy Irons.
Emini simatasatasa kakhulu ngezindaba zethu ezimbi kangangokuba kubonakala ngathi akunakwenzeka ngathi ukuthi othile phezulu lapho abuke izinyathelo zethu, futhi ngokuzikhandla nangokuhleleka, ahlele ukunqotshwa kweplanethi yoMhlaba. Ubusuku kuphela obukwaziyo, nobumnyama bayo nokuthula kwayo, ukudala izimo ukuze amaMartian, amaSelenites nezinye izidalwa ezihlala endaweni yonke, babe nendawo emcabangweni wethu.
Iyini inzuzo yenkolo uma iyeka ukubhekana nezinhlekelele?
Kuze kube yileso sikhathi angizange ngiqonde ukuthi ngangilapho ngingenakuzisiza futhi ngedwa. Ngokungazelelwe, njengokuthile okuwa kimi, ukwesaba kwangibamba.
Kungenzeka ukuthi ukuhlasela kwamaMartian, ekugcineni, kube yinzuzo kithi; okungenani kusiphuce lokho kuzethemba okuqinile esikhathini esizayo, okuwumthombo oqinisekile wokuwohloka.
Ongakusho ngosaziwayo umsakazo Yini eyenzile Orson Welles yale noveli ngo-Okthoba 30, 1938? Kwakungu- ukuzivumelanisa kwaseshashalazini, wehora, kubalwa ngo- ifomu lezindaba umzuzu wokugcina. Kwangena kakhulu kubalaleli ukuthi wonke umuntu wakholwa okwangempela lokho kuhlasela kwabokufika. Ihlale njengomzuzwana womsakazo njengomlando njengoba kungenakuphindwa. Futhi ukuzivumelanisa namafilimu akukwazanga ukukunqoba.
Okwakudala kakhulu, owawina i-Oscar ngemiphumela yokubuka izinto, yaqala ngo-1953 e 2005.
Isiqhingi SikaDokotela Moreau
Isilwane singaba nolaka futhi sibe namaqhinga anele, kepha kudinga indoda yangempela ukuqamba amanga.
Angikaze ngizwe ngento engenamsebenzi leyo, kungekudala noma kamuva, ukuziphendukela kwemvelo okungazange kuphele. Nawe? Futhi ubuhlungu abudingeki.
Izilwane zingaba nobuqili futhi zibe nolaka, kepha ngumuntu kuphela okwazi ukuqamba amanga.
Iqiniso lokuthi lezi zidalwa empeleni zazingezona nje izilo ezinonya, izinto ezesabekayo zohlobo lwesintu, zangenza ngakhathazeka ngokungangabazeki ngokuthi zizokwazi yini, zimbi kakhulu ukwedlula noma yiluphi uvalo oluthile.
Ngisele ne-classic kusuka kuma-70s ababedlala kuyo UBurt Lancaster noMichael York ngo-1977. Kodwa kukhona naleso esenziwa cishe eminyakeni engama-20 kamuva UMarlon Brando noVal Kilmer.
Imibono emikhulu nemangazayo edlula kokuhlangenwe nakho kaningi iba nomthelela omncane kwabesilisa nabesifazane kunokubheka okuncane, okubambekayo.
Bonke abantu besilisa, ngisho nabafunde kakhulu kunabo, banokuthile okuyinkolelo ngabo.
Mina ngedwa, kuyamangalisa ukuthi kuncane kangakanani umuntu angakwenza yedwa! Intshontsha kancane, wenze umonakalo omncane, bese kugcina lapho.
Ngiyindoda enamandla futhi nginesandla esinzima; Ngaphandle kwalokho, angibonakali. Akungabazeki ukuthi angababulala bobabili abaleke ngokukhululeka, uma ethanda. Bayavuma?
Futhi kulokhu ngithatha okukhulu UClaude Rains lokho kwenza ubuso nomzimba kubonakale ku-protagonist ku-classic ye 1933. Kepha kukhona nokuhlonishwa nokuhluka kwezihloko ezifana Indoda engenasithunzi, nge Kevin Bacon ngonyaka 2000. Futhi ikakhulukazi, uchungechunge lwamashumi ayisikhombisa kusukela ebuntwaneni bami engikuthanda kakhulu ukuthi ngikuthande kangakanani UBen murphy, protagonist yayo.
Yikuphi okufanele ugcine?
Ukukhetha kanzima. Ngakho-ke into enhle kakhulu ongayenza ukufunda (noma ukubuka) noma yiziphi izindaba zikaWells.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » inganekwane yesayensi » HG Imithombo. Ukukhumbula umlobi omkhulu wezinganekwane zesiNgisi